Job 30 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
30 “Ugbu a, ha achịwo m ọchị,+Bụ́ ndị m tọrọ atọ,+Ndị m na-agaraghị ekwe ka nna haSoro nkịta ndị na-edu ìgwè ewu na atụrụ m nọrọ. 2 Ọbụna ike aka ha—olee uru ọ baara m?Ike ha nwere alawo n’iyi.+ 3 Ha enweghị ume n’ihi ịnọ n’ụkọ na agụụ,Ha na-ata ihe n’ógbè mmiri na-adịghị,+N’ebe e nwere oké ifufe na mbibi ụnyaahụ. 4 Ha nọ na-akụrụ ahịhịa nnu n’ọhịa,Nri ha bụkwa mgbọrọgwụ osisi brum. 5 A ga-achụpụ ha n’obodo;+Ndị mmadụ ga-etiri mkpu na-eso ha n’azụ dị ka e si eme onye ohi. 6 Ha ga-ebi ná mkpọda ndagwurugwu,N’ọnụ ndị a tụrụ n’ala nakwa na nkume. 7 Ha ga-anọ n’ime ọhịa na-eti mkpu;Ha ga-agbakọta ọnụ n’okpuru ahịhịa akụwa. 8 Ụmụ onye nzuzu+ na ụmụ onye na-enweghị aha,A pịapụwo ha n’ala ha. 9 Ugbu a, aghọọla m ọbụna ihe ha ji agụ egwú,+Aghọwokwara m ha ihe ịkwa emo.+ 10 Ha na-asọ m oyi, ha anọrọwo m n’ebe dị anya;+Ha ahapụghịkwa ịgbụ m ọnụ mmiri n’ihu.+ 11 N’ihi na ọ tọpụrụ ụdọ m wee weda m ala,Ha enweghịkwa ihe na-egbochi ha ime m ihe ọjọọ. 12 Ha na-ebili n’aka nri m dị ka otu ìgwè;Ha atọhapụwo ụkwụ m,Ma ha wuru ihe mgbochi ọjọọ ha wee na-emegide m.+ 13 Ha emebiwo okporo ụzọ m;Naanị uru ha bara bụ ịkpatakwuru m ahụhụ,+N’enweghị onye na-enyere ha aka. 14 Ha na-abịa dị ka ọ̀ bụ n’oghere sara mbara ka ha si;Ha enukọrọwo na-abịa mgbe oké ifufe mmiri na-efe. 15 E mewo ka ụjọ mberede jide m;A na-ekusasị ùgwù m dị ka ihe ifufe na-efesasị,Nzọpụta m agabigawokwa dị ka ígwé ojii. 16 Ugbu a, a na-awụpụ mkpụrụ obi m n’ime m dị ka mmiri;+Ụbọchị ahụhụ+ na-abịakwasị m. 17 N’abalị, ọkpụkpụ+ na-amị m amị, na-adapụsịkwa,Ihe mgbu m adịghịkwa akwụsị akwụsị.+ 18 Ike ya nke dị ukwuu na-eme ka uwe m gbanwee;Ọ na-agba m gburugburu dị ka olu uwe mwụda m. 19 O wedawo m n’ájá,M wee dị ka ájá na ntụ. 20 M na-etiku gị maka enyemaka, ma ị dịghị aza m;+Eguzorowo m ọtọ, ka i wee ṅaa m ntị. 21 Ị na-agbanwe wee na-emeso m ihe n’obi ọjọọ;+I ji ike gị dum na-ebuso m iro. 22 Ị na-ekugoro m n’ikuku, ị na-eme ka o buru m;I wee mee ka m jiri oké ụzụ daa kụrie. 23 N’ihi na amaara m nke ọma na ị ga-eme ka m laghachikwuru ọnwụ,+N’ụlọ nke onye ọ bụla dị ndụ ga-aga. 24 Ọ bụ naanị na ọ dịghị onye na-esetị aka ya imegide ihe e kpofuru ekpofu,+Ọ dịghịkwa onye na-etiri ihe ndị ahụ mkpu enyemaka mgbe mmadụ na-ada ada. 25 N’ezie, akwaworo m onye ụbọchị na-esiri ike ákwá;+Mkpụrụ obi m eruworo ogbenye uju.+ 26 Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ọma ka m nọ na-echere, ọ bụ ihe ọjọọ bịara;+M nọkwa na-echere ìhè, ma, ọ bụ ọchịchịrị bịara. 27 E mere ka eriri afọ m gbaa ghara ghara, ọ nọghịkwa jụụ;Ụbọchị nhụjuanya bịakwasịrị m. 28 M nọ na-ejegharị ná mwute+ mgbe ìhè anyanwụ na-adịghị;Ebiliri m ọtọ n’etiti ìgwè mmadụ, m nọ na-eti mkpu enyemaka. 29 Aghọrọ m nwanne nkịta ọhịa,Ghọọkwa enyi nke ụmụ enyí nnụnụ.+ 30 Akpụkpọ ahụ́ m gbajiri oji,+ dapụsịakwa,Ọkpụkpụ m kpowere ọkụ n’ihi ịkpọ nkụ. 31 Ụbọ akwara m wee bụrụ naanị maka iru uju,Ọjà m abụrụkwa maka olu ndị na-akwa ákwá.